प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण | Nepali Outlook
प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण भ्रष्टाचार गर्न छुट, गित गाउन प्रतिबन्ध ? प्रवासबाट बडुवालकाे अाराेप: निर्मला हत्या काण्डका दोषीलाई सरकारले पक्राउ गर्न चाहेन! तीन महिने छोरीको अनुहार समेत हेर्न पाएनन् लाम्बाले : कश्मीरले लियो ज्यान संगठनको रकम नेपालका आईएनजीओमा
प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण
Published On: February 22, 2019 || 2075 फाल्गुन 10 शुक्रबार , at 12:17 PM
प्रजातन्त्र राजनीति गर्ने एउटा सिद्धान्त मात्र होइन, यो त केवल जीवन यापनको एक छुट्टै परिपाटी पनि हो । प्रजातन्त्रवादी व्यक्तिको जीवनको प्रत्येक दिनमा, प्रत्येक कदममा, हरेक बोलीबचन वा व्यावहारमा प्रजातन्त्रको छाप हुनुपर्छ । उदाहरणका निमित्त प्रत्येक प्रजातन्त्रबादी व्यक्तिमा सहनशीलता, उदारता, घमण्डीहिनता र दु:ख कष्ट सहनसक्ने बिशाल हृदय राख्ने गुणहरु हुनु एकदमै जरुरी छ ।
जुन व्यक्ति अरुलाई हेप्ने, ठग्ने, हेला गर्ने, शोषण गर्ने, अन्याय अत्याचार गर्ने गर्दछ, ऊ जुनसुकै पार्टीको भए पनि प्रजातान्त्रिक हुन सक्तैन, ऊ निरंकुशतावादी या तानाशाही हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यक्तिहरूले समाजमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु र त्यसलाई सघैं बढाउँदै लानु अति आवश्यक छ । संस्थामा प्रजातान्त्रिक वातावरण सिर्जना गर्नु भनेको सानोदेखि लिएर सबैभन्दा ठूलो नेतासम्मलाई संस्थाको विधान भित्र बाँधेर राख्नु हो । नेताद्वारा कार्यकर्ताको शोषण हुन नदिनु हो र सबैलाई निर्धक्कसंग आफ्नो विचार प्रकट गर्न दिनु हो ।
कसै–कसैको यो भनाइ छ कि प्रजातान्त्रिक व्यक्तिको राजनीतिक आचरण राम्रो हुनु नै पर्याप्त छ, उसको व्यक्तिगत चालचलन जस्तोसुकै होस् । यो धारणा पूर्व र पश्चिमका बासिन्दाको जीवन दर्शनमा ठूलो फरक छ । पश्चिमी जनता व्यक्तिगत आचरणमा उत्तिसाह्रै ध्यान दिंदैनन् तर पूर्वीय देशमा जनता व्यक्तिगत आचरणलाई पहिलो जोड दिन्छन् र त्यसपछि मात्र राजनीतिक आचरणलाई राख्दछन् । व्यक्तिगत आचरण राम्रो भएन भने राजनीतिकर्मीहरू जनताको नजरमा गिर्नेछन् ।
तीन महिने छोरीको अनुहार समेत हेर्न पाएनन् लाम्बाले : कश्मीरले लियो ज्यान
संगठनको रकम नेपालका आईएनजीओमा
1 प्रजातन्त्र र हाम्रो आचरण
2 भ्रष्टाचार गर्न छुट, गित गाउन प्रतिबन्ध ?
3 प्रवासबाट बडुवालकाे अाराेप: निर्मला हत्या काण्डका दोषीलाई सरकारले पक्राउ गर्न चाहेन!
4 तीन महिने छोरीको अनुहार समेत हेर्न पाएनन् लाम्बाले : कश्मीरले लियो ज्यान
5 संगठनको रकम नेपालका आईएनजीओमा
1 कति पटक यौन सम्पर्क गर्दा, स्वास्थ्यका लागि फाईदा हुन्छ !
2 तीन महिने छोरीको अनुहार समेत हेर्न पाएनन् लाम्बाले : कश्मीरले लियो ज्यान
4 भ्रष्टाचार गर्न छुट, गित गाउन प्रतिबन्ध ?
5 मास्टर थापा भन्छन् : नेपाल विश्वका हिन्दुकाे, आस्थाको केन्द्र हो ।
प्रणय दिवस: नेपाली संस्कार र हिन्दु बिचार भुल्दै गएका हामी ?